Yusuf Garaad: Xabsiga Orlando – 10 Sano, 7 Bilood & 1 Maalin - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Saddex iyo Labaatanaad
Xabsiga Orlando – 10 Sano, 7 Bilood & 1 Maalin - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Saddex iyo Labaatanaad
Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta ee Havana
Orlando Cardoso Villavicencio waa duuliye u dhashay dalka Cuba. Waxay ciidammada Soomaaliya ka soo qabteen aagga Harar. Taliyihiisii iyo rag kaleba waxay ku dhinteen weerarkii gaadmada ahaa ee isaga lagu soo qabtay.
Markii la qabtay da'diisu waxay ahayd labaatameeyo. Derajadiisa ciidan hadda waa Gaashaanle Dhexe. Waxaa u dheer in la siiyay Billad-geesi. Waa Billadda Geesinnimada ee Jamhuriyadda Cuba.
Qoraaga Ruushka ah ee Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky ayaa hadda ka hor shaqo gacmeed khasab ah lagu fulinayay sannado isaga oo ku jira xabsi ku yaalla Siberia. Dostoyevsky wuxuu sheegay in markii xabsiga uu ka soo baxay aanuu waxba dareemin. Markii aan Dostoyevsky ku akhrinayay xabsiga ma fahmin arrintaas. Laakiin markii aan ka soo degay gegida dayaaradaha José Martí ee Havana ayay igu dhacday tabtii uu qoraalkiisa ku tilmaamy Dostoyevsky ee isaga ku dhacday markii laga sii daayay xabsiga Siberia.
Waxaan ku riyooday baabuurkii aan la socday markii la i soo weeraray ee la i qabtay. Waxaa baabuurka wada Nebi Ciise. Midigtiisa waxaa fadhiya, Captain Corona oo weerarka ku dhintay. Aniguna dhanka dambe ayaan sariirta baabuurka jiifaa.
Nebi Ciise ayaa gadaal ii soo eegay oo igu yiri xaggeen u soconnaa? Aniguna markaas ayaan gogasha ka soo booday oo aan is arkay in aan joogo Laanta Buur.
*Hawaale, waxaan u qaatay in ay noqon karto Cawaale.
Posted by Yusuf Garaad at 08:11:00